Lahatsoratra nataon'i Chris Donald ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chris Donald
Chris Donald dia talen'ny InboxGroup, masoivohon'ny varotra mailaka matihanina izay manampahaizana manokana amin'ny fanomezana tolotra mailaka vokarin'ny vokatra. Niara-niasa niasa tamin'ny orinasa Fortune 500, goavam-be mpivarotra, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, SMB ary rafi-panjakana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandaharan'asan'ny mailaka amin'ny serivisy mailaka sy programa automatisation marketing mandritra ny 2 taona. Faly izy mizara ny eritreriny sy ny fahitany manokana momba ny fomba tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka ao amin'ny bilaoginy.
The Anatomy of a Email Newsletter
Alatsinainy Aprily 15, 2019 Alatsinainy Aprily 15, 2019 Chris Donald
Ny marketing amin'ny mailaka no fomba mora indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fanatonana ireo mpihaino kendrenao sy hitazomana azy ireo hirotsaka. Mety ho fitaovana fampandehanana vola amin'ny orinasanao notadiavinao io! Amin'ny alàlan'ny paikady marketing mailaka mety, dia afaka manatratra fidirana bebe kokoa amin'ireo mpanjifanao efa misy ianao ary mametraka ny hafatrao eo imason'ny mpanatrika lehibe kokoa. Tombony lehibe iray amin'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny media sosialy